कर सदस्यमैत्री हुनुपर्छ ः दवाडी
By vijayafm on	 March 28, 2017 अन्तरवार्ता
नेपालमा सवैभन्दा पहिले चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण सहकारी संस्था वि सं २०१३ चैत २० स्थापना भएको थियो । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । ६० औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका लागि ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ नारा तय गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सम्भावना र राष्ट्रिय सहकारी दिवसको तयारी तथा नेस्कुनका पछिल्ला गतिविधिबारे नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेस्कुन) का सञ्चालक भरतप्रसाद दवाडीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सहसम्पादक प्रेम क्षेत्रीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
स्वागत छ यहाँलाई विजय खबर पत्रिकामा ।
सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता संगठनको सञ्चालकको नाताले पदीय जिम्मेवारी पनि भएकाले अल्लि बढी व्यस्त छु ।
छाता संगठन भन्नुभयो तर धेरैले नेस्कुन छाता संगठन बन्न सकेन भन्छन नि ?
हैन केही समय पहिले थियो होला तर बिस्तारै बिस्तारै सबै साथीहरु र संस्थालाई लिएर हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
किन सवै सहकारी आवद्ध हुन सकेनन् ?
यस्मा हामीले बुझाउन पनि सकिरहेका छैनौँ । सहकारी अभियन्ता साथीहरुको चासो कम भएर पनि होला तर हामी प्रयासरत छौं ।
नेस्कुनले अहिले के गरिरहेको छ ?
अहिले आना कार्यक्रमहरु लिएर आएको छ । जसमा सञ्जालीकृत साकोस भनेर एउटा नेटवर्कमा राख्ने अभियानमा छ । दिगो सहकारीको निमार्णमा केन्द्रित छ । नीति, विधी र कार्यविधीबाट सुसज्जित संस्थाका रूपमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित छ ।
अहिले सम्रगमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?
यो धेरै भेग कुरा हो । नेपाली समाजमा रहेका तीन वर्ग दिँदा खाने, हुँदा खाने र हुने खाने बीचको सम्बन्ध मजवुत बनाउन पुलको काम गर्ने सँगै आर्थिक समद्धिको यात्रामा लैजानका लागि सहकारी एउटा अचुक औजार हो । यो एउटा सेवामुखी व्यवसाय हो । तसर्थ यो बनाउनका लागि समर्पित भइरहेका छौं ।
सेवामुखी भन्नुभयो नेस्कुन त वित्तीय कारोबारमा बढी केन्द्रित छ भन्ने आरोप लागिरहन्छ नि ?
यसमा सेवामुखी भनेको सदस्य सेवामुखी भन्न खोजेको हो । सहकारी भनेको यो समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित व्यवसाय नै हो ।
के अहिले नेपालको सहकारी अभियान सही बाटोमा हिँडेको छ ?
सहकारी अभियान पूर्णतया सही बाटोमा छ पनि भन्दिन तर यसले बाटो बिर्सिएको छ पनि भन्दिन । हामी सहकारीको यात्रामा हिँड्दै गर्दा अब पुनजाँगरणको यात्रा समाप्त भएको र अब साकोस समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
अहिले एकीकरण अभियान तीव्र देखिन्छ यो कत्तिको आवश्यक छ ?
यसमा दुई वटा पक्ष छन् । सहकारी बचत विकासको बिज हो । सृजनाको जननी र समृद्धिको आधार पनि हो । सानो सानो पुँजी धेरै मान्छे भएर जम्मा गरे भने थोरै पुँजी पनि धेरै हुन्छ ।
भोली बढेर प्राप्त हुने पुँजी लगानी गर्न सहज र सजिलो पनि हुन्छ । सानाले थोरै खाएर चित्त बुझाएका पनि छन् । तर लगानी गर्न पुँजी धेरै आवश्यक छ । साना साना सहकारी धेरै छन् तर सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने होइन । यस्मा लागत खर्च बढेर गयो । त्यही भएर एकीकरण हुनुपर्छ ।
त्यसो भए थोरै सदस्य र पुँजी भएका सहकारीको भविष्य छैन ?
होइन, त्यो पनि होइन । अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । हिजो सहकारी विभिन्न प्रकार, विभिन्न उद्देश्यले खोलिएका होलान् । तर विचारका आधारमा सहकारी हुने होइन । सहकारी समृद्धिका लागि हो, आर्थिक उन्नतिको लागि हो, जीवन रूपान्तरण गर्नका लागि हो भन्ने मान्यताबाट सहकारी चल्न आवश्यक छ ।
सहकारी दिवस नजिकिँदै छ नेस्कुनको तयारी के छ ?
यो सन्दर्भ पारेर हामीले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेका छौं । यो पच्चिस वर्षसम्म पनि अझ नेस्कुनको इतिहासमा नै नभएको काम हामीले गर्दैछौ । दिवसका अवसरमा चैत्र २१ र २२ गते लेखा समितिका संयोजकलाई नै काठमाडौं बोलाएर लगभग पाँच सयको हाराहारीमा उपस्थिति गराएर विश्व ऋण महासंघ र एसियाली ऋण महासंघका प्रविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय लेखा समिटको आयोजना गरेका छौं । यो सँगै अरू पनि कार्यक्रम हुन्छन् ।
अन्त्यमा साकोसलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित गराउन सकिन्छ ?
यसमा दुई वटा छ । राज्यको पनि अनुगमनकारी निकाय छ । राज्यको मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, तालिम केन्द्र यी सबैसँग हामी अभियानमा रहेका अभियन्ताहरु एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ । र एउटा सहकारीले गरेको सानो गल्तीले सिंगो सहकारी अभियानमा हिलो छ्याप्ने काम गर्नुहुन्न । हामीले पनि उहाँहरु र उहाँहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्दै सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि राज्यले लगाएको दोहोरो करको अन्त्य हुनुपर्छ । यो सदस्यमैत्री भएन । सहकारी मैत्री कर लगाउँदै सदस्यमैत्री कानुन ल्याउनुप¥यो ।
हवस् धन्यवाद छ कुराकानी र समयका लागि ।
धन्यवाद छ, मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकामा विजय खबर पत्रिका र तपाईलाई पनि ।
विजय खबर पत्रिकाबाट
स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण पहिलो प्राथमिकतामा – संयोजक सापकोटा
संस्कृत शिक्षाजस्तो प्रत्युत्पादक अर्को शिक्षा छँदै छैन – स्वामी आत्मानन्द गिरी